ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အမေး (၅၀ ) နှင့် အဖြေ (၅၀ ) အပိုင်း ၁
ဧပွီ ၃၀, ၂၀၁၇ - ၁၁:၃၄ ညနေ News Code : 827040 Source : ABNA Link:
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ အမေး (၅၀ ) နှင့် အဖြေ (၅၀ ) အပိုင်း ၁ အဖြစ် အဗ်နာ ချစ်ပရိတ် သတ်များ ကိုဖော်ပြ အပ်ပါတယ်။
(၁) မေး။ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တစ်ဦး အား မေတ္တာလက်ဆောင်အဖြစ် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ? အကယ်၍တစ်ဦး တစ်ယောက် အနေဖြင့် ဤကဲ့သို့ လက်ဆောင်ပေးခဲ့ မိမည်ဆိုလျှင် ပြန်ပြီးတောင်းခံရ မည်လား ဆိုတာ လေး သိလိုပါတယ် ?
(၂) မေး။ အကယ်၍ အိမ်နီးချင်းအိမ် က သစ်သီးပင်၏ အကိုင်းများမှတဆင့် သီးနေသည့် သစ်သီးများ တန်တိုင်ကိုကျော်ပြီးကျွန်တော်တို့အိမ်ဝန်းထဲရောက်နေပါသည်။၎င်းသစ်သီးများကို စားသုံးခွင့် ရှိမရှိ ဖြေကြားပေးပါခင်ဗျား။
(၃) မေး ။ အဗ်ဒွလ္လာဟ် ၊ဟဘီးဘွလ္လာဟ် စသည်ဖြင့်နာမည် မှည့်ထားသူများ ၏အမည်များကို ဝဇူမရှိဘဲရေးသားမည်၊ထိတွေ့မည်ဆိုလျှင် မည်သည့် ရှရီအီ အမိန့် ရှိပါသနည်း ? ဖြေ ။ ။ ((အလ္လာဟ်)) ဆိုသည့် အမည်တော်အား သွာဟာရသ် ( ဂူစ်လ်(သို့) ဝဇူ (သို့) သယာမွန်မ် ) မရှိဘဲ ထိတွေ့ခွင့် မရှိချေ။ အေစ်သေဖ်သာအသ် သေ အေမာမ်ခိုမေနီး အတွဲ (၁) ၊ စာမျက်နှာ ၄၈ ၊မေးခွန်းအမှတ် ၈၂
(၄)မေး။ တီဗီ ၊မိုနီတာ နှင့်မိုဘိုင်း မျက်နှာပြင်တွင် ရှိနေသည့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များကို ဝဇူ မရှိဘဲ ထိတွေ့ ခွင့်ရှိပါသလား?
(၅)မေး။ အကယ်၍ ခင်ပွန်းသည် မှ မိမိ၏ ဇနီး အား စေလာယေရဟ်မ် ( အထူးသဖြင့် မိဘနှစ် ပါး ကိုတွေ့ဆုံ ခြင်း) လုပ်ခြင်း ကို တားမြစ်မည် ဆိုလျှင် ဇနီးအတွက် မည်သည့် တာဝန် ရှိပါသ နည်း ? ခင်ပွန်းသည်၏ ခွင့်ပြုချက် မယူဘဲ မိဘနှစ်ပါး နှင့် တွေ့ရန် သွား နိုင်ပါသလား?
(၆)မေး။ နမာဇ် မြဲသူ နမာဇ်ဇီ ဧည့်သည် အားအိမ်တွင် ဧည့်သည်အဖြစ် ရှိနေစဉ် ၎င်း၏ ခွင့်ပြုချက် မယူဘဲ နမာဇ်အတွက် နိုးထပေး နိုင်ပါသလား ?
(၇)မေး။ မနုဿ လူသားအနေဖြင့် မိမိ၏ ဇနီး နှင့် အရွယ်မရောက်သေးသည့် သားသမီးများ ကို နမာဇ် ဝတ်ပြုရန် အလို့ငှာ နိုးထပိုင့်ခွင် ရှိပါသလား ?
(၉) မေး ။နမာဇ် မဖတ်သူ (သို့) နမာဇ်ကို လက်မခံသည့် သူ(သို့)သူမ အတွက် ကုရ်အာန်ခွာနီ လုပ်ပိုင် ခွင့် ရှိပါသလား ?
(၁၀)မေး ။တအားဟောင်းနွမ်း သွားပြီး ဖတ်ရွတ်ရန် ခက်ခဲသွားသည့် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် များကို တွင်းတူးပြီးမြေကြီးထဲ ဒဖ်နာရမည်လား(သို့) မီးရှို့ ရမည်လော?
(၁၁)မေး ။ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များကို ကျောင်းသင်ပုန်းပေါ်တွင် မြေဖြူဖြင့် ရေးသား အသုံးပြုပြီးနောက် ပြန်ဖျက်ချိန်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် ဖြေဖြူ မှုန့် များ အောက်သို့ကျလေ၏ ။ ထို အမှုန့်များကို ဝဇူမရှိဘဲ ကိုင်လို ရပါသလား ?
(၁၂)မေး ။ မတော်တဆ မနုဿ လူသား၏ လက်ထဲ မှ ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်မြေပြင်ပေါ်သို့ ပြုတ်ကျခဲ့မည် ဆိုလျှင် မည်သည့်တာဝန် ရှိပါသနည်း၊ကဖာရာ(ရှရီအီဒဏ်) ရှိပါသလား ?
(၁၃)မေး ။ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန် ဖတ်ရွတ်နေချိန် ခြေများကို ဆင်း၍ ဖတ်ရွတ်ခြင်းသည် မရိုမသေ၊မလေးမစားပြုခြင်းမည်ပါသလား?
ဖြေ ။ ။အကယ်၍ မရိုမသေ၊မလေး မစားပြုသည့်ရည်ရွယ်ချက် မပါက ဟရာမ် မဟုတ်ချေ။ သို့သော်အခြေအနေတိုင်း (အရေးကြီးအချိန် (အခက်အခဲရှိချိန်) မှအပ)ဤကဲ့သို့ ခြေဆင်း၍ ဖတ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ပိုကောင်းလေ၏။
(၁၄) မေး ။ အကီးက်လက်စွပ် အပေါ် (သို့) ရင်ဆွဲ (ဆွဲကြိုး) အပေါ် မြင့်မြတ်သည်နာမတော်များ (အလ္လာဟ်၊ရစူလ်၊နဘီများ(အ.စ)အားလုံး၊ ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၊ အေမာမ်၁၂ပါး (အ.စ)၊ ဟဇရသ် ဇဲဟ်ရာ (စ.အ) ၏နာမတော်များ ) သို့မဟုတ် ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ်အာန်၏ အာယတ်တော်များ ရေးထားမည်။၎င်းအရာများ ကို ဝတ်ပြီး အိမ်သာ တက်ချိန် ဝတ်ခွင့် ရှိပါသလား ?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ မရိုမသေပြုသလို၊မလေးမစားပြုသလို မဖြစ်မည်၊ဝဇူမရှိဘဲ(နာမတော်များကို) မထိမည်ဆိုလျှင် ပြဿနာ မဟုတ်ချေ။
ညွန်း - အာဒါဗ်ဝါအဲဟ်ကာမ် မေ ကုရ်အာန်(မဟ်မူဒ်အက္က်ဘရ်) စာမျက်နှာ၃၅
(၁၅)မေး မိုမင်(သို့) မိုမေနာ တစ်ဦးဦးအား စွပ်စွဲမှု အတွက် မဟာတမန်တော် မြတ်ကြီး (ဆွ) ဘာများ မိန့်တော်မူထားပါသလဲခင်ဗျား ?
(၁၆)မေး ။ သိက္ခာမဲ့သည့်အဆဲ၊ဆဲဆိုသူများအတွက် ဂျန္နသ်(အမတသုခဘုံ) သည်ဟရာမ် ဖြစ်သည်ဆို သည်မှာ မှန်ကန်ပါသလား ?
(၁၇) မေး ။ အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အား သတ်ဖြတ်ခဲ့သူများ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း နေသူများ အပေါ် အမြဲတန်းလအ်နသ်ပို့ခွင့်ရှိရှိပါသလား ?
(၁၈)မေး ။နာမဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများ (မိန်းကလေးများ ) အနေဖြင့် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ထိုနည်းတူ ပွဲများ တွင် ကိုယ်လုံး ကိုယ်ထည်ကို ပေါ်စေသည့်အဝတ်အထည်များ ၊ဟိုပေါ် ဒီပေါ် အဝတ်အထည်များကို ဝတ်ခွင့်ရှိ ပါသလား ?
(၁၉) မေး ။နာမဟ်ရမ် အမျိုးသမီးများ (မိန်းကလေးများ ) နှင့် လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခွင့် ရှိပါသလား ?
(၂၀)မေး ။ မာန်၊ မာနမဲ့ ကျိုးနွံ့ စွာနေခြင်း၏ လက္ခဏာ ကို ဖော်ပြပေးပါ။ ?
(၂၁)မေး ။လက်ဆောင်ပေးခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သည့် အလုပ် ဖြစ်ပါသလား ?
(၂၂)မေး ။ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကိုယ်ထမင်းကို စားပြီး စကားအပေးအယူ ပြုတဲ့သူတွေ ရှိပါတယ် ...သူတို့ကို ရှရီအသ် တရားတော်အရ မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံရမည်နည်း?
ဖြေ ။ ။ ၎င်းတို့ကို ဆက်ဆံရန် အိုလမာယေ ရှီအာ အနေဖြင့်နည်းလမ်းများ မိန့်ကြား၊ရေးသားထား ပါသည်။ဤနေရာတွင်ကျွန်တော်အနေဖြင့် အီရန်နိုင်ငံ ရှိသာသနာ့ပညာရှင်များက သင်ရိုးညွန်းတန်း အဖြစ်သီးကုံးထားသည့် (အာဒါဗ်ဗေအစ္စလာမ်မီ ကျမ်း )အတွဲ (၁) မှအချို့ အချက်ကို ကောက် နှုတ်ဖော်ပြပါမည်။
(၁)၎င်းသည်ရရှီအသ်အမြင်အရဖာစေက်ဖြစ်ရာ သူ၏စကားကိုအသေအချာ မလေ့လာဘဲ လက်မခံ သင့်ချေ။
(၂၃)မေး ။ရှိင်တွာန်အနေဖြင့် လူသားတွေအပေါ်လုပ်သည့် သံသယ၊ဇဝေဇဝါ ဘယ်နှစ်မျိုး ရှိပါသနည်း ?
(၃) လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရ တွင် သံသယ၊ဇဝေဇဝါဖြစ်အောင်ပြုခြင်း (သာဓက အားဖြင့် ကိုယ်အသေအချာ မသိဘဲ လူတစ်ယောက်က အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ကြည့်နေတာမြင်လျင် အသေအချာမစိစစ် တော့ဘဲ စွပ်စွဲပုတ်ခေတ်ခြင်း၊ စသည်ဖြင့် (ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် ဒေါက်တာ ရဖီးအီး ဟောကြားထားသည့် ((دام های شیطان )) အမည်ဖြင့် ဝါဇ်မှ ကောက်နှုတ် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
(၂၄)မေး ။ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ) သခင်ကို ကရ်ဗလာမသွားရန် အေမာမ်(အ.စ)အားမေတ္တာ ရပ်ခံခဲ့သည့်အုပ်စုများကို မည်ကဲ့သို့ ခွဲခြားနိုင်ပါသနည်း?
ပထမအုပ်စု ။ ။ အချစ်မေတ္တာကြောင့် ဥပမာ ဟဇရသ်အွမ်မေစလ်မာ(ရ.သွေ့) သခင်မ…
တတိယအုပ်စု ။ ။ အထောက်အထားသက်သေများပြ၍ ဥပမာ ဟဇရသ်ဂျာဗေရ် အဗ်နေအဗ်ဒွလ္လာဟ် အန်ဆွာရီ (ရ.သွေ့) …….တို့ဖြစ်ပါသည်။
(၂၅)မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) အနေဖြင့် မိမိ၏ရှီအာများထံ မှဘာအလိုရှိပါ သလားဆိုတာ သိပါရစေခင်ဗျား ?
အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) အနေဖြင့် မိမိ၏ရှီအာများထံ မှ အလိုရှိသည်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ် ပေသည်။
(၂၆)မေး ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် သားသမီးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မိဘနှစ်ပါးကိုဆက်ဆံပုံလေးကို သိပါရစေ.. ?
ဖြေ ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် သားသမီးများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ မိဘနှစ်ပါးကို ဆက်ဆံ ပုံလေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြရမည်ဆိုလျှင် ကိုယ်တော် မြတ်ကြီး ဟဇရသ် မိုဟမ္မဒ် (ဆွ) မိန့်တော်မူထားပါသည်။
(( (ထိုခေတ်အချိန်အခါ တွင် )လူသားအနေဖြင့်မိမိတို့မိဘ နှစ်ပါးအပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ၊ရက်စက်ကြ ပေမည်သို့သော်မိမိတို့၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း များအပေါ်အချစ်မေတ္တာ ထားပြီးကောင်းမွန်စွာ ဆက် ဆံကြ ပေမည်။ ))
(၂၇) ။ ။ မေး ။ နောက်ဆုံးခေတ်ကာလ ရောက်လာချိန်တွင် ရိုသေလေးစားမှု ဂါရဝတရား နှင့် ပတ်သက်ပြီး သိပါစေခင်ဗျား ?
((ထိုခေတ်အချိန်အခါ တွင် ကလေးငယ်များအပေါ် သနားကြင်နာ ယုယကြမည် မဟုတ်၊လူကြီးများ ကိုလည်းရိုသေလေးစားဂါရဝပြုကြမည်မဟုတ်ချေ။ ))
(၂၈)မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့်များ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှီိအာများပေးဆပ် ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရား ရှိပါသလား?
(၂၉)မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့်များ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရှီိအာများပေးဆပ် ရမည့်တာဝန်ဝတ္တရား ရှိပါသလား?
((အိုအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် … ကျွန်တော်မျိုးတို့ကို အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ၏ဟူကူးက် (ရပိုင်ခွင့် များ) ပေးဆပ်ထမ်းဆောင်တာဝန်ကျေနိုင်ရာရောက်ရန်အလို့ ငှာ ကိုယ်တော်(အ.ဂျ)၏အမိန့်များ လိုက် နာ ကျင့်သုံး နိုင်ရန် ကြိုးစားမှုစွမ်းအား နှင့် ကိုယ်တော်(အ.ဂျ) ၏ အမိန့်များကို မသွေးဖီ၊ မဆန်ကျင့် ရန် စွမ်းအားပေး သနား တော်မူပါ။)) ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။
(၃၀)မေး ။ အေမာမ်ဇမန် (အ.ဂျ) ဖူးပွင့်ဖို့ အဘယ်ကြောင့် ကြာနေရပါသနည်း?
(( အသင်တို့၏ ဂိုနာအပြစ်တစ်ခု သည် ကျွန်ုပ် ဖူးပွင့်ဖို့ ရက် (၄၀) ကို ကြံ့ကြာစေလေသည်။))
(၃၁)မေး ။ သူငယ်ချင်း စိတ်ဓာတ် ဆိုတာ ဘယ်လိုလဲ ဆိုတာ ကို သိပါရစေခင်ဗျား …
(၃၂)မေး ။ အကယ်၍ မည်သည့် ခင်ပွန်းသည်မဆို မိမိ၏ဇနီးသည် အား သာသနာ့ နှင့်ရှရီအီ အလုပ်များကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ပြုရန် မပြုနိုင်လျှင် ဖာစေက် (သာသနာ့စည်းမျဉ်း များကို ဖောက်ပျက်သူ) စာရင်းဝင်သွားပါသလား?
ဖြေ ။ ။ အကယ်၍ နဟီးအဇ်မွန်ကရ် (မကောင်းရာကိုတားမြစ်ခြင်း) ပြုနိုင်လျက် မပြုခဲ့လျှင်ဖာစေက် ဖြစ် ပေသည်။
(၃၃)မေး ။ ။ တစ်ချို့ဘာသာရေး လုပ်သူတွေ ကို တွေ့ရပါတယ် ...ဥပမာ နိုင်ငံတကာ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ပြပွဲစသည်ဖြင့်... မြန်မာ ရှီအာများ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် စာအုပ်စာတန်းတွေ နိုင်ငံတကာက ကြည့်ရှု နိုင်ရန် ခင်းကျင်း ပြသရပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ စာအုပ်တွေ ကို ဥပမာ msm စာစောင် ၊နောက်အချို့ မောင်လာနာ များ၏ ဘာသာပြန်စာအုပ်များ ၊ အရင်ကထွက်ဝေ ခဲ့သည့် စာစောင်၊စာအုပ်များကို မခင်းကျင်းမပြထားပါဘူး… ဘာကြောင့်ပါလဲ ခင်ဗျား …?
(၃၄)မေး ။ ။ အကြင်မည်သူမဆို လိမ်၍ ၊မုသားဆို၍ ကဆမ်စားမည် ပြီးနောက် ရှက်ပြီး (နောင်တ) ရမည်ဆိုဆိုလျှင် ၎င်းအတွက် မည်သည့်တာဝန် ရှိပါသနည်း ?
(၃၅)မေး ။ မှတ်သားစရာ စကားလေးတစ်ခုလောက် သိပါရစေခင်ဗျား …?
ဖြေ။ ။ မှတ်သားစရာ ကတော့ အများကြီးပါ။ လတ်တလောအတွက်အကောင်းဆုံးစကားကလေး တစ်ခွန်းကတော့ အီရတ် နိုင်ငံနဂျဖ်မြို့မှာ ၈ နှစ်ကျော် ပညာသင်ယူနေတဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများမှ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဟွဂ်ျဂျသွလ်အစ္စလာမ် မောင်လာနာ ဆရက်ဒ် မိုဒရ်စေရ် (အိန္ဒိယ) ၏ စကား လေး တစ်ခွန်းပါ။ ဒါလဲ့သူအနေဖြင့် မောင်လာအလီ (အ.စ) ၏ သြဝါဒတော် တစ်ခု ကို တင်ပြထားတာပါ။ ထိုသြဝါဒကတော့ (( လောက၌အကောင်းတကာ အကောင်း ဆုံး သူမှာ ၎င်း အတွက် လူတွေ ငိုကြသူဖြစ်ပြီး လောက၌အဆိုးတကာအဆိုး ဆုံးသူ မှာ ၎င်း ကြောင့် လူတွေငိုရသူ ဖြစ်ပါသည် … )) ဟုဖြစ်လေသည်။
(၃၆) မေး ။။ထမင်းစားပွဲမှကျသည့်အရာများကိုကောက်၍စားခြင်းကြောင့်ဘာအကျိုး ရနိုင် ပါသနည်း?
ဖြေ ။ ။ (( အကြင်မည်သူမဆို ထမင်းစားပွဲမှ ကျသည့် အရာ(ထမင်း၊စားစရာများ) ကောက်၍ စား မည်ဆိုလျှင်၎င်း၏ သားသမီးများသည် လှပ၊ချောမောပြီး တောင်းတ မှုမှ ကင်းကြမည်ဖြစ်ပေသည်။
((မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) / ညွှန်း - مدارج النّبوة
(၃၇)မေး ။ အို အမာရ် … အသင်အားဇွာလင်မ် နှင့် သူပုန် အုပ်စုမှသတ်ဖြတ် လိမ့်မည်ဟု မဟာတမန်တော်မြတ်ကြီ(ဆွ) မိန့်တော်မူခဲ့တာမှန်ပါသလား?
ဖြေ ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မှန်ပါသည်။ ဤဟဒီးစ်တော်သည် ဟဒီးစ်တော်များဆိုင်ရာ ပညာရပ်အရ(မိုသာဝါသေရ်) အဆင့်အဖြစ်လာရှိတော်မူပြီး၊ ဆွာဟာဗာသာဝက တော်ပေါင်း ၃၄ပါးမှ ဆင့်ဆိုခဲ့ကြပါသည်။
(၃၈)မေး ။ အစ္စလာမ်အတွက် အန္တရာယ်ကျရောက်လာချိန်တွင် မိဘ နှစ်ပါး၏ ခွင့်ပြုခြင်းမယူ ဘဲ ကာကွယ်ရန် ထရပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူကြီးမင်း မည်သည့် ဟွက်မ် ရှိပါသနည်း ?
ဖြေ ။ ။အစ္စလာမ်နှင့်မွတ်စလာမ်များကိုကာကွယ်ပေးရမည်မှာဝါဂျစ်ဗ်မလုပ်မနေရ ဖြစ်ပေသည်။ ဤလုပ်ရပ်အတွက် မိဘ နှစ်ပါး ထံမှာခွင့်ပြုချက်ယူဖို့မလိုအပ်ချေ။ သို့သော်တတ်နိုင်သလောက် မိဘနှစ်ပါး ကျေနပ် ၊သဘောတူ ခွင့်ပြုလာအောင် ကြိုးစား ရပေမည်။
(၃၉)မေး ။ အချို့ ဆိုက်ဒ် နှင့်အင်တာနက် သတင်းဌာနများတွင် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ကြင်ယာတော် (၂ပါး) နှင့်ပတ်သက်ပြီး မဖွယ်မရာ ၊မသင့်တော်သည့် စကားများရေးသား၍ကြင် ယာ တော်များ ၏ စာရိတ္တ နှင့်နွယ်ပြီး မသင့်တော်သည့် စွပ်စွဲမှုများ ပြုကြပါသည်။ ၎င်းတို့နှင့် စပ် လျဉ်း ပြီးလူကြီးမင်း၏ ဖသ်ဝါ ကို သိပါရစေ ခင်ဗျား ?
ဤကဲ့သို့သော် ပုတ်ခပ်စော်ကားမှုများကြောင့်အစ္စလာမ်မီဖေရ်ကာများအားလုံးနှင့် မဇ်ဟဗ် အဟ်လေ့ဘိုက် (အ.စ) အကြား အပြင်းအထန်း မတည်ငြိမ်မှုများ၊ စိုးရိမ်ရမှုများ ၊မလုံခြုံမှုများ ၊စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီးခံရမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ ကြောင်းလူကြီးမင်းအသိပင်၊ဖုံးဖိထားစရာ ပင်မလိုပါ ခင်ဗျား …
ဖြေ။။အဟ်လေ့စွန္နတ်ညီနောင်များအလေးအမြတ်ထားသည့်အရာများကိုစော်ကား ခြင်း၊ပုတ် ခတ်ခြင်းသည်ဟရမ်ဖြစ်ချေသည်။ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)၏ကြင်ယာ တော်များ ကိုစွပ်စွဲခြင်းသည်အလွန် တရာ ကြီး မားလေးလံသည် အပြစ်ဖြစ် ပေသည်။ ဤကဲ့သို့သော်လုပ်ရပ်သည်တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ) အားလုံး ၏ကြင်ယာတော်များ အထူးသဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ကြင်ယာတော်များ အတွက် တားမြစ်ထားချေသည်။
(၄၀)အမေး ။ ဆဒ်ကာ နှင့်ပတ်သက်သည့် အဟ်ကမ်လေး သိပါရစေခင်ဗျား?
(၆) တောင်းစားခြင်းနှင့်တောင်းစားသူကိုမပေးကမ်းခြင်း(မြန်မာလိုကန်တော့ (သို့)မအ်ဖ်လုပ်ပါ) ဆိုပြီး ပြန်လွတ်ခြင်းသည် မက်ရူ ဖြစ်ပေသည်။
(၄၁)အမေး ။ Salaaam......MSM.. ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွင်းကျင်းပ သောအခန်းအနားများ(eg..Majalis,Milard,Mawlood) တွင်ဘာသာရေးနှင့် မဆိုင်သောတခြားသူတယောက်အားပုပ်ခက်ပြောဆိုခွင်.ရှိ.ပါသလား? မိသားစုသားရေးသမီးရေး ရှင်းလင်းပွဲပုံစံပြုလုပ်ခွင်.ရှိပါသလား?
(၄၂)အမေး ။ စလာမ်...
(၄၃)အမေး ။ စလာမ်...
(၄၄)အမေး ။ စလာမ်...
ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ ဆရက် အလီ ခါမေနာအီမပိုင်ချေ။
(၄၅)အမေး ။ စလာမ်...
မေးလ်ဖြင့်ဖြေ ဟဇရတ်အာယာသွလ္လာဟ်အလ်အွဇ်မာ ဆရက် အလီ ခါမေနာအီရုံး ၊ကွမ်း (၂၀၊၃၊၂၀၁၃)
(၄၆)အမေး ။ စလာမ်...
(၄၇)အမေး ။ စလာမ်...
(၄၈)အမေး ။ စလာမ်...
(၄၉)အမေး ။ စလာမ်...
(၅၀)အမေး ။ စလာမ်...
မိုင်ယဒ် ကဖန် ထုပ်ပြီးနောက်အနားတွင် ကျမ်းမြတ် ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုထားပါသလား။